Homamiadana mpahazo ny vehivavy : Hanao fitiliana maimaim-poana ny “Fondation Akbaraly” -
AccueilSongandinaHomamiadana mpahazo ny vehivavy : Hanao fitiliana maimaim-poana ny “Fondation Akbaraly”
Homamiadana mpahazo ny vehivavy : Hanao fitiliana maimaim-poana ny “Fondation Akbaraly”
08/03/2018 admintriatra Songandina 0
Maro amin’ireo vehivavy malagasy no tratran’ny homamiadan’ny vozon-tranon-jaza sy ny homamiadan’ny nono. Lafo dia lafo anefa ny fitsaboana azy ireo, ary sarotra ihany koa aza ny fitiliana satria dia handoavam-bola.
Noho izay indrindra, amin’izao ankatoky ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy izao dia manatanteraka fitiliana maimaim-poana hitiliana ny homamiadan’ny vozon-tranon-jaza sy ny nono ny “Fondation Akbaraly”, izay hatao manomboka ny 12 marsa hatramin’ny 17 marsa 2018 eto Antananarivo.
“Ity hetsika ity dia tohanan’ny minisiteran’ny Fahasalamana, ny minisiteran’ny Tanora sy ny Fanatanjahan-itena, ny Fondation Akbaraly, ny Ong La Vita Per te, ny Fikambanana Pachamama, ary ny distrikan’ny boriborintany faha-II. Ho avy eto an-drenivohitra ny Unité Mobile “LUISA” an’ny Fondation Akbaraly hanatanteraka izay fitiliana maimaim-poana izay. Marihina fa tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony foana no nahazatra azy ireo hatramin’izay, saingy amin’ity indray mitoraka ity dia sambany ho hanao asa soa ho an’Antananarivo io ekipa io. Vinavinaina vehivavy maherin’ny 18 000 no ho voatily amin’izany. Eo amin’ny fokontany Ambatoroka, Andohan’i Mandroseza, Antanimora ary Manakambahiny no hijanona io Unité Mobile “ Luisa” io, ka eny ny olona no manatona”, araka ny fanazavana nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly, tetsy amin’ny Tour Orange , rihana faha-23 , tetsy Ankorondrano omaly.
Hamarana ny hetsika kosa dia hisy ny lalao baolina lavalava na rugby iraisam-pirenena, ka handraisan’ireo ekipa vehivavy anjara etsy amin’ny Stade Mahamasina ny 17 marsa 2018. Tsiahivina moa fa nandritra ny taona maro no efa nisehatra tamin’ny asa soa momba ny ady amin’ny homamiadana ny “Fondation Akbaraly”. Manana ivon-toerana 2 miahy ny fitsaboana ny ankizy sy ny reny ao Fianarantsoa ( REX) sy ao Mahajanga ( Hôpital Candide) izy, ary efa eo am-pametrahana ny ivon-toerana faha-3 eto Antananarivo ihany koa. Ny fisorohana mialoha ny aretin’ny homamiadan’ny vozon-tranon-jaza sy ny nono moa no tena iasan’izy ireo.
Efa azo ampiasaina amin’ izay, ary notokanana ny 23 ny volana jona teo ireo plaky hahazoana herinaratra any Ampohimpihaonana , distrikan’ Ambatolampy izay manome herinaratra hatrany amin’ ny 20 Mw, izy io no goavana indrindra ...Tohiny